Imeziwanye arụmọrụ Magento na nsonaazụ azụmaahịa gị | Martech Zone
Imeziwanye arụmọrụ Magento na nsonaazụ azụmaahịa gị
Tọzdee, Febụwarị 5, 2015 Friday, February 6, 2015 Tony Barbagallo
Magento na-ghọtara dị ka n'elu-e-azụmahịa n'elu ikpo okwu, na-enwe ike ruo otu ụzọ n'ụzọ atọ nke niile online mkpọsa weebụsaịtị. Nnukwu njirimara ọrụ ya na netwọkụ ndị nrụpụta mepụtara okike ebe, na-enweghị oke nka na ụzụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla nwere ike ịnweta saịtị e-commerce ma na-agba ọsọ ọsọ.
Agbanyeghị, enwere ọghọm: Magento nwere ike ịdị nro ma nwayọ nwayọ ma ọ bụrụ na ejighị nke ọma rụọ ọrụ. Nke a nwere ike ịbụ ezigbo ntụgharị maka ndị ahịa taa na-agba ọsọ ọsọ na-atụ anya oge mmeghachi ọsọ ọsọ site na weebụsaịtị ha gara. N'ezie, dị ka a nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya site na Clustrix, Pasent 50 nke ndị mmadụ ga-azụ ahịa n'ebe ọzọ ma ọ bụrụ na ebe nrụọrụ weebụ ji nwayọọ nwayọọ na-ebupụta peeji.
Ọchịchọ a na-achọwanye ọsọ ọsọ webụsaịtị emeela ka arụmọrụ Magento ka ọ dị elu na ndepụta maka ọtụtụ ndị mmepe ọkachamara. Ka anyị leba anya n’ụzọ atọ ụlọ ọrụ nwere ike isi melite arụmọrụ nke nyiwe Magento ha.
Mejuputa Onyinye Obula di na Dia (CDN)
Netwọk Nzipu Afọ -enye gị ohere offload gị na ihe oyiyi na ndị ọzọ static ọdịnaya ka data emmepe ndị dị gị nso ahịa. Mbelata ụzọ njem pụtara na ọdịnaya ga-aga ebe ahụ ọsọ ọsọ. N'otu oge, site na iwepụ ọdịnaya gị na ebe nrụọrụ weebụ gị, ị na-ahapụ ihe onwunwe iji kwe ka ndị ọrụ ndị ọzọ na-emekọrịta ihe, yana oge ka mma-nzaghachi. Ihe nkesa nchekwa data gị na-arụ ọrụ kachasị mma ma rụọ ọrụ nke ọma mgbe ọ nwere ike itinye uche na ịmepụta, imelite, nkwenye na ịmecha azụmahịa. Bochum na-agụ naanị na nchekwa data gị na-emepụta ibu ọrụ na-enweghị isi na mgbochi maka saịtị ntanetị e-commerce.
Hazi ihe nkesa nchekwa data gị nke ọma
Magento na-eme otu ajụjụ ahụ na sava nchekwa data oge ọ bụla elere ibe akwụkwọ anya, ọ bụ ezie na ọ bụghị nnukwu mgbanwe na ajụjụ ndị a karịa oge. Ekwesịrị ịghachite data ahụ na diski ma ọ bụ mgbasa ozi nchekwa, hazie ma mezie ya, wee laghachikwuru onye ahịa ahụ. Nsonaazụ: tinye na arụmọrụ. MySQL na-enye nhazi nhazi nhazi akpọrọ query_cache_size nke na-agwa ihe nkesa MySQL ka ịchekwa nsonaazụ ajụjụ na ebe nchekwa, nke dị ngwa ngwa karịa ịnweta site na diski.
Mbelata arịrịọ, itinye CDN na ịhazi sava nchekwa data MySQL, kwesịrị ịkwalite arụmọrụ Magento; Agbanyeghị, a ka nwere azụmaahịa ndị ọzọ nwere ike ịme iji bulie arụmọrụ saịtị niile. Iji mee ka ndị nchịkwa saịtị e-commerce mkpa ịtụleghachi na backend MySQL nchekwa data kpamkpam. Nke a bụ ihe atụ mgbe ịlele MySQL kụrụ mgbidi:
(Re) Nyochaa ebe nchekwa data gị
Ọtụtụ saịtị ntanetị e-commerce na-eji ebe nchekwa data MySQL na mbụ. Ọ bụ a nwalere nwapụtara nchekwa data maka obere saịtị. Ọ dị na ya. Ebe nchekwa data MySQL nwere oke ha. Ọtụtụ ọdụ data MySQL enweghị ike ịnagide agụụ na-arịwanye elu nke ebe nrụọrụ weebụ e-commerce na-eto ngwa ngwa, n'agbanyeghị na arụmọrụ Magento kachasị. Ọ bụ ezie na saịtị ndị na-eji MySQL nwere ike ịdị mfe site na efu ruo ndị ọrụ 200,000, ha nwere ike ịkpagbu mgbe ha na-erugharị site na ndị ọrụ 200,000 ruo 300,000 n'ihi na ha enweghị ike ịbawanye ụba na ibu. Anyị niile makwaara, ọ bụrụ na weebụsaịtị enweghị ike ịkwado azụmaahịa n'ihi nchekwa data ezighi ezi, akara azụmaahịa ga-ata ahụhụ.
Tụlee ihe ngwọta ọhụrụ - Luckily, enwere ihe ngwọta: nchekwa data NewSQL na-echekwa usoro mmekọrịta nke SQL mana gbakwunye arụmọrụ, scalability na ọdịdị dị na MySQL na-efu. Ebe nchekwa data NewSQL na-enye ndị azụmaahịa ohere ịrụzu ọrụ ha chọrọ maka ngwa ha bụ isi, dị ka Magento, ebe ha na-eji ihe ngwọta eme enyi na ndị mmepe nke gbanyeworo mkpọrọgwụ na SQL.
Leverage usoro nhazi - NewSQL bụ nchekwa data njikọ nke na-etu ọnụ maka arụmọrụ na-enweghị atụ, mmesi obi ike nke azụmahịa ACID yana ikike ịhazi ọtụtụ azụmahịa na arụmọrụ kacha mma. Ọrụ ndị a na-eme ka o doo anya na ahụmịhe ịzụ ahịa ndị ahịa enweghị nsogbu site na mbenata ma ọ bụ iwepu oge ọ bụla dijitalụ na-egbu oge ha nwere ike ịnagide. Ka ọ dị ugbu a, ndị na-eme mkpebi nwere ike nyochaa data maka nghọta n'ime ụzọ isi zube ndị ahịa site na ire ahịa na ire ere.
Elọ ahịa e-commerce na-akwadoghị agaghị arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụrụ na ha enweghị ike ijikwa ibu dị arọ, ọkachasị n'oge oge ọnụọgụ ụba. Site n’inwe ego buru ibu, na-anabata SQL nchekwa data, ị nwere ike ijide n’aka na saịtị e-commerce gị nwere ike ijikwa ọnụ ahịa ọ bụla n’ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnọdụ ọ bụla, yana ịnye ndị ahịa ahụmịhe ịzụ ahịa na enweghị ntụpọ
Leveraging a n'ọtụtụ-esi SQL nchekwa data na-enhances Magento arụmọrụ. Nnukwu uru dị na nchekwa data SQL na-enweghị atụ bụ na ọ nwere ike ịmalite ịmalite ịgụ, na-ede, mmelite na nyocha ka agbakwunyere isi data na ngwaọrụ. Mgbe a na-emepụta ihe eji eme ihe na igwe ojii, ngwa ọhụrụ nwere ike ịmịnye mgbakwunye nke ndị ahịa ọhụụ yana ịba ụba azụmahịa.
Na dabara nke ọma, na nchekwa data NewSQL nwere ike kesaa ajụjụ gafee ọtụtụ sava nchekwa data, ebe ị na-arụ ọrụ na-arụzi ọrụ gị nke ọma. Nke a bụ ihe atụ nke nchekwa data NewSQL, ClustrixDB. Ọ na-arụ ọrụ ihe nkesa isii, na-ekesa ma dee ma gụọ-ajụjụ gafee ọnụ isii ahụ, ka ọ na-eche nche nke ọma na usoro itinye n'ọrụ usoro yana oge igbu oge:
Gbaa mbọ hụ na ezigbo ahịa ahịa
Ọ bụrụ na ị bụ onye nwe azụmaahịa, ị ga-eme ihe niile ị nwere ike iji hụ na ahụmịhe e-commerce zuru oke maka ndị ahịa gị, n'agbanyeghị agbanyeghị saịtị gị na-ejikwa n'oge ọ bụla. A sị ka e kwuwe, mgbe a bịara n'ịhọrọ nhọrọ ịzụ ahịa n'ịntanetị, ndị ahịa taa nwere nhọrọ na-enweghị njedebe - otu ahụmahụ ọjọọ nwere ike ịchụpụ ha.
Tags: ustyọkọmagentomagento arụmọrụMySQLakụkọarụmọrụ
Tony bụ CMO nke Clustrix, Ntuziaka nchekwa data SQL na-eduga n'ọtụtụ igwe ojii na ọdụ data mbụ emere ka ọ nwee ike ịba ụba ego, arụmọrụ yana nnweta nke saịtị e-commerce taa.
Ihe kpatara nsogbu na nsogbu dị egwu nke esemokwu data
8 Mere ịkwụ ụgwọ gị kwa Pịa Strategy Na-akụ